४ वर्षभित्र सांसद भएरै छोड्छुः गौतम » खबरहरुको एउटै केन्द्र
४ वर्षभित्र सांसद भएरै छोड्छुः गौतम
शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३५ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सांसद भएरै छोड्ने बताएका छन् । उनले घोषणापत्र तयार गर्ने संयोजक भएको बताउँदै चुनामा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न आफू संसदमा आउनु अनिवार्य भएको बताए ।
‘गुरु लुइँटेल स्मृति प्रतिस्ठान’ शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता गौतमले घोषणापत्र बनाउने संयोजकलाई बेवास्ता गर्दा चुनताको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै संसदको बाँकी अवधिभित्र आफू संसदमा पुग्ने दाबी गरे । दुई तिहाईका कारण पार्टी नेतृत्वमा दम्भ देखा परेको समेत दाबी गरे ।
सरकारले चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै गौतमले पार्टीभित्र देखा परेको दम्भलाई आफूले ठिक पार्ने समेत बताए । उनले काम गर्न संख्याले फरक नहुने बताउँदै काँग्रेसले २०१५ मा दुई तिहाई बहुमत ल्याएर पनि काम जनताको लागि केही गर्न नसकेको उदाहरण दिए । उनले संख्याले नभएर काम गर्ने भिजनले भएको समेत बताए ।
PREVIOUS POST Previous post: कालीञ्चोकमा केबुलकार चल्यो
NEXT POST Next post: पिपिएल क्रिकेटको फाइनलमा चितवन राइनोज र पोखरा पल्टन
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ २२:३५